Ihe 3 ị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-eke azụmahịa Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Mma nke e-azụmahịa ọ na-adọrọ nnọọ ndị ahịa mma. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na nnukwu ụlọ ọrụ na-achọ ịchịkwa ahịa ahụ. N'agbanyeghị nke a, ndị Ecommerce na-aghọ akụkụ dị iche iche na-arịwanye elu, ruo n'ókè na enwere ọtụtụ nhọrọ maka ụlọ ọrụ na-achọ ohere bara uru.
Ma ị ọkachamara na ere ahịa, nchekwa, ma ọ bụ mpaghara ọ bụla ọzọ, enwere ihe ị kwesịrị ichebara echiche mgbe ị na-eke azụmahịa Ecommerce.
1 1. Nkwụ ụgwọ ekwentị
2 2. Nnukwu data
1. Nkwụ ụgwọ ekwentị
Na ugwo ugbua Ha na-enwe mmetụta dị ukwuu na omume nke ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa. Enwere ike ịzụta ihe site na mobile ngwa ma ọ bụ site na ugwo ọnụ enweghị kọntaktị. Ọ bụrụ na ị na-eche maka azụmahịa Ecommerce, ị kwesịrị ị na-echekwa banyere inye nkwado maka isi ọrụ ịkwụ ụgwọ ekwentị, nke n'aka nke ọzọ pụtara ịtụle itinye ego na teknụzụ nhazi ịkwụ ụgwọ.
2. Nnukwu data
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụle azụmahịa kọmputa na usoro nke ịkwalite azụmahịa, agbanyeghị enwere ndị ọrụ ndị ọzọ ma a bịa na azụmahịa dijitalụ. Ecommerce na - eweputa data buru ibu nke na eme ka ndi ulo oru ghota ndi ahia ha nke oma. Site na ijikọta Nnukwu data na mmemme nyocha, ụlọ ọrụ gị nwere ike inweta ụdị ihe ọmụma ga - enyere gị aka ịtụ anya usoro azụmaahịa tupu oge eruo ma bulie ego gị.
Nche bụ otu egwu kachasị na uto nke Ecommekwuo. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, cyberattack dị elu nwere ike ime ka ndị ahịa kpachara anya, na-ahọrọ nhọrọ ịzụ ahịa ọdịnala, ọbụlagodi na ha ga-achụrịrị ịdị mma na mgbanwe nke ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ya mere, a Azụmahịa azụmaahịa ga-enwerịrị ụkpụrụ nchekwa kachasị elu ma jigide ozi ndị ahịa ebe ọ dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Ihe 3 kwesiri iburu n'uche mgbe imeputa ahia Ecommerce
Kedu oge bụ oge kachasị mma iji melite ikpo okwu Ecommerce gị